‘Musanyare, sungisai vanobata chibharo’ | Kwayedza
18 Jan, 2019 - 00:01	 2019-01-17T16:49:32+00:00 2019-01-18T00:04:23+00:00 0 Views
MAPURISA eZimbabwe Republic Police (ZRP) vari kushushikana nekuwanda kuri kuita mhosva dzevakadzi nevana vari kubatwa chibharo munyika yose. Zvisinei, mapurisa anoti haasi kuzodzokera shure pakurwisa kuparwa kwemhosva dzerudzi urwu. Mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commisioner Paul Nyathi, vanoti zvinosuwisa zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa madzimai nevanasikana vachibatwa chibharo, vamwe vavo vachiguma vabata pamiviri kana kuzadzwa zvirwere.
“Kuburikidza nekuwanda kuri kuita mhosva dzezvibharo munyika, ikurudziro yedu kuvanhu vose kuti vamhan’are nyaya dzavanofungira kuti pane kushungurudzwa kwevanhukadzi. Tinoona kuti madzimai nevasikana vanobatwa chibharo kungava kumachechi, mudzimba, mumabasa, kuzvikoro nekumwe izvo tinoda kuti mhosva idzi dzisvitswe kumapurisa nenguva,” vanodaro.
Vanoti vamwe vapari vemhosva idzi vatungamiri vemachechi semaporofita kana mafundisi.
“Hama chaidzo, vangava vanababamukuru, hanzvadzi, vanasekuru kana masahwira vanotora mikana yekuva pedyo nemadzimai kana vanasikana voguma vavabata chibharo. Kazhinji kacho hapana kumhan’arwa kunoitwa vanhu vachiedza kugadzirisa nyaya idzi nekuda kwekuti ihama.
“Asi isu semapurisa tinoti nyaya dzerudzi urwu ngadzimhan’arwe pasina kutya,” vanodaro.
Vanoenderera mberi vachiti, “Mhosva imhosva hazvinei kuti yaparwa nani, mhan’arai chibharo nenguva vanhu vasungwe voendeswa kumatare edzimhosva vachinopihwa zvirango zvavo.”
Mai Edinah Masiyiwa, vanova executive director wesangano reWomens Action Group (WAG), vanotiwo vari kushushikana zvikuru nekuwanda kwemhosva dzekubatwa chibharo kwemadzimai nevanasikana.
“Tiri kufamba tichiita dzidziso kuvanhu kuti nyaya idzi ngadzirege kuvigwa, ngadziburitswe nguva iripo vanhu vasungwe,” vanodaro.
Mashoko avo anotsinhirwa naVaWalter Vengesai vanova director wesangano rePadare/Enkundleni Men’s Forum on Gender vachiti nyaya dzekubatwa chibharo kwemadzimai dzinofanirwa kumhan’arwa nekukasika.
“Sangano redu rinomirira varume nemadzimai tichigadzirisa matambudziko anobata vose. Varume tinovadzidzisa kuti munhukadzi akangofanana naivo haadi kumbunyikidzwa. Tiri kushanda nemapurisa kuti kuparwa kwemhosva idzi kupere,” vanodaro.
Mai Ekenia Chifamba vanova director wesangano reShamwari Yemwanasikana vanokurudzirawo masangano anomirira madzimai nevanasikana kuti vashande pamwe chete mukurwisana mhosva dzekubhinywa kwevanhukadzi.
“Mhosva zhinji dzechibharo hadzimhan’arwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Saka tinoti vanhu ngavaende kumapurisa kana kuuya kusangano redu totaura nyaya idzi,” vanodaro.
Archbishop Johannes Ndanga, vanova mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe (ACCZ), vanoshora varume vanopara mhosva dzerudzi urwu.
“Hakuna simba raMwari rinoti muporofita anofanirwa kunamatira munhu akamuvharira mumba kana mukati memakomo nemumasango uye vari voga. Imiwo madzimai rambai izvi zvekunzi huya ndikunamatirei mubako, zivai kuti patoipa kana padaro.
“Tinoti dai Hurumende yaita vapari vemhosva idzi majon’asi,” vanodaro.